၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Luc Besson ရိုက်ကူးသော The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ဤနေအိမ်ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ ဒါရိုက်တာ Luc Besson ၏ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အောက်တွင် သူ၏ အဖွဲ့သားများသည် အတိကျဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အိမ်အားပြန်လည်တည်ဆောက်စဉ်တွင် အရပ်လေးမျက်နှာမှစ ထပ်တူဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့် ကြည့်ရှုသူပရိသတ်သည် နေထွက်သည်မှစ ထပ်တူခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုရုပ်ရှင်ထဲမှ နေအိမ်အား ဂြိုဟ်တုများမှ ရရှိသော ဓာတ်ပုံများနှင့် မိသားစုဓာတ်ပုံ ၂၀၀ ခန့်ကို အခြေပြုပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ၁:၁ အတိုင်း အတိကျဆုံးဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
↑ Wintle၊ Justin (2007)။ Perfect Hostage။ Skyhorse Publishing။ p. 9781602392663။
↑ Sudekum Fisher၊ Maria (14 May 2009)၊ "Motives of American who swam to Suu Kyiamystery"၊ Associated Press
↑ Zaw၊ Aung (13 May 2009)၊ "Suu Kyi's Stalker Swimmer"၊ Irrawaddy
↑ NCGUB Archived4March 2012 at the Wayback Machine. quote: "If he wins the case, U Aung San Oo is expected to turn his share of the house over to the government,aresult which would put Daw Aung San Suu Kyi in an extremely precarious position."
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခြံအမှတ်_(၅၄)၊_တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း&oldid=692826" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။